पोखरा – ३३ का पनि भेटिए कोरना संक्रमीत ! « Pokhara Pati
पोखरा – ३३ का पनि भेटिए कोरना संक्रमीत !
पोखरा – कुवेतबाट फर्किएका ३ महिलासहित पोखराका ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पोखराका ४ वटा वडाका ३ पुरुष र ४ महिलामा मंगलबार साँझ कोरोना पुष्टि भएको हो ।
पोखरा महानगरपालिका स्रोतका अनुसार मंगलबार थपिनेमा वडा नम्बर ३३ का ३ जना, वडा नम्बर ३२, २६, १३ र १० का १र१ जना छन् । पोखरा महानगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका वडा नम्बर ३२, २६, १३ र १० का महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
संक्रमित ३ पुरुष भने भारतको दिल्लीबाट र १ महिला चितवनबाट पोखरा आएको स्रोतले बतायो । मंगलबार साँझ संक्रमण पुष्टि भएका सातै जना पोखरा ८ को लेकसिटी हस्पिटलको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
अर्की संक्रमित महिला भने श्रीमानसँगै चितवनबाट पोखरा आएकी हुन् । उनी वडा नम्बर ३२ की हुन् । ‘घर पोखरै भए पनि उता व्यापार गर्नुहुने रहिछ । श्रीमानरश्रीमति हप्ता दिन पहिला पोखरा आएर हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो,’ महानगर स्रोतले भन्यो । चितवनबाट आएकी संक्रमित महिलाका श्रीमानको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।
संक्रमित सबैलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा लगिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय ९७ पुगेको छ । कास्कीका ७ संक्रमितसहित प्रदेशका ७ जिल्लाका १ सय ४ जनामा मंगलबार साँझ कोरोना पुष्टि भएको छ ।
पोखरा, काठमाडौं र भरतपुरमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा प्रदेशका १ सय ४ जनामा मंगलबार कोरोना देखिएको स्वास्थ्य निर्देशक विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका संक्रमितमध्ये ९१ जना निको भएर घर फर्किएको उनले बताए । संक्रमितमध्ये वालिङका १ पुरुषको २५ जेठमा पोखरामै उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।